musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Yakakosha Line-up Inovhura Global Tourism foramu muJakarta
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Indonesia Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura
Global Tourism Foramu Yevatungamiriri Summit
Global Tourism Forum (GTF) yakavhura Vatungamiriri Summit Asia mangwanani ano muJakarta uye iri kutora yakakosha mutsara-wevatungamiriri vevashanyi.
Vatungamiriri Summit Asia chiitiko chepasi rose mumunda wekushanya uye kugamuchira vaeni.
Musangano uyu une tarisiro yekuita tsvagiridzo yemhando yepamusoro yekushanyirana kuti vagovane kubudirira uye kuchinjana mazano pakati pehurumende nenyika dzebhizinesi.
Global Tourism foramu chirongwa cheLondon-chakavakirwa World Tourism Forum Institute.
Iyo Vatungamiriri Summit Asia inomhanya nhasi uye mangwana, Gunyana 15-16, 2021. Iyo ipuratifomu yekubatana kwepasi rose yakanangana nekugadzirisa matambudziko kune indasitiri yekufamba. Ichisanganisa kuedza kwakabatana kwemasangano ehurumende, vane chekuita nemaindasitiri pamwe nedzidzo, GTF inovavarira kuwana mhando dzebudiriro yekusimudzira yemisika yekufamba iri kusimuka, pamwe nekuronga nzira dzekuona kukura kwekushanya.
Vaive Mutevedzeri weMutungamiriri weIndonesia, HE Prof. Ma'ruf Amin, ndivo vakavhura Musangano kuRaffles Hotel muJakarta mushure mekugamuchira kero naDr.Sapta Nirwandar, Sachigaro weIndonesia Tourism; Va Balut Bagci, Mutungamiri weWorld Tourism Forum Institute; naDr.Sandiaga Salahuddin Uno, Gurukota rezveKushanya nehupfumi Hupfumi hweRepublic of Indonesia.
Dr. Taleb Rifai, aimbova Secretary-General weUNWTO uye zvino Secretary-General weWorld Tourism Forum Institute & Patron weAfrican Tourism Board, akataurawo kumhemberero yekuvhura.
Mutsara unoshamisa wevatauri vanosanganisira Mutevedzeri weMutungamiri weTurkey, HE Fuat Oktay; HE Dato Dato Lim Jock Hoi, Secretary General weASEAN; VA Mr. Tony Blair, aimbova PM weUK; Alain St. Ange, aimbova Gurukota rezvekushanya, Civil Aviation, Ports & Marine eSychelles uye zvino Mutungamiriri we African Tourism Bhodhi & Secretary-General weFORSEAA, pakati pevamwe vazhinji vakakurumbira maspika. ASEAN Tourism Ministers lineup ichave ichabatawo musangano unokosha wekukurukurirana.
Iyo 2021 Yekushanya Hunhu yakatumidzwa neGlobal Tourism Foramu yaive Mutungamiriri weRepublic of Indonesia.
Global Tourism foramu inobatawo chinzvimbo chinotungamira mukukwezva mari yekunze yakananga kune nyika yakanangwa, nekushanda kuona mikana yebhizinesi, kusimudzira zviitiko zvine hungwaru nekupa rutsigiro kune vanoita mari vekunze vanoda kugovera zviwanikwa munyika yakanangwa.
Tourism muIndonesia muenzaniso wakanaka wekuita zvinhu nemazvo. Chikamu chekushanya chakakosha sosi yemari yekunze kwenyika uye chikamu chakakosha muhupfumi.
Indonesia yakanyorwa senzvimbo ye20 inokwezva vashanyi pasi rose uye yepfumbamwe inokurumidza-kukura pasi rose muna 9. Nzvimbo zhinji dzinozivikanwa pasi rose dzakaona kuwedzera kukuru mu2017, neDenpasar, Jakarta, neBatam pakati penzvimbo gumi dzinokurumidza kukura, ine 2018, 32.7, uye 29.2 muzana gore-pamusoro-gore kukura zvinowirirana. Iyo indasitiri yevashanyi yaive yechina pakukura maererano nehuwandu hwezvigadzirwa nemasevhisi anotumirwa kunze.
Vashanyi vekune dzimwe nyika vekuIndonesia vakawedzera ne1.9% mu2019, kubva pamamiriyoni gumi nematanhatu muna16.1. Vanosvika mamirioni 2018 evashanyi vekunze vakauya kuIndonesia muna9.73, vachipedza avhareji yehusiku 2015 mumahotera uye vachigara avhareji yemazuva 7.5, kwehuwandu yeinenge $ 7.5. Gore rimwe chetero, vashanyi vekunze kwenyika kuIndonesia vakashandisa madhora zana nemakumi maviri nemaviri kana madhora zana nemakumi maviri nemaviri kubva pazuva. Imwe yenzvimbo shanu dzinonyanya kushanya kuIndonesia ndiSingapore, Malaysia, China, Australia neJapan.
Indonesia yakapihwa chinzvimbo che40th muTravel uye Tourism Kukwikwidza Chirevo 2019 ine Travel uye Tourism Kukwikwidzana Index mamaki e4.3. Indonesia yakaratidza chinzvimbo che makumi mana nemaviri kubva pamarudzi gumi nematanhatu muchidzidzo cha42 nezvibodzwa zve136. Sekureva kwechidzidzo ichi, indasitiri yekushanya muIndonesia ine mutengo wemakwikwi chinhanho chechitatu kubva pamazana zana negumi nepfumbamwe.